Sajhasawal.com.np | Home जीवनभर स्वस्थ्य रहनका लागि यी ५ उपाय जानीराखौ
भूपरिवेष्टित राष्ट्रलाई वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग गर्न प्रधानमन्त्रीको आह्वान (पूर्णपाठ सहित)
काँग्रेसको चौधौं महाधिवेशन निष्पक्ष गर्ने वातावरण बनाउन माग
हेर्दै जानुस्, उहाँले पछुताउने दिन आउँछ : लालबाबु पण्डित
नेपालमा कोरोना बिरुद्धको दुई करोड ५० लाख 'Sputnik V' खोप ल्याउन सम्झौता
विद्युत प्राधिकरणका ग्राहकलाई जरिवाना नलाग्ने
सर्लाहीका सोह्र क्रसर उद्योग बन्द
'कोरोना परीक्षण अब एन्टिजेन किटबाट, ५८८ रुपैयाँ लाग्ने, नतिजा १५–३० मिनेटमै' : डब्लूएचओ
सन् २०२० मा चीनको अर्थतन्त्र २.० प्रतिशत बढ्ने विश्व बैंकको प्रक्षेपण
६ महिना पछि आज सबैभन्दा बढी उडान नेपाल आए
व्यवसायी संघले भन्यो 'स्वदेश फर्कन चाहने नेपालीलाई फिर्ता ल्याउने कार्य सहज गराउनु'
नेपाल ओमानबीच छिट्टै श्रम सम्झौता
मलेसियाको एक प्रस्ताव : गोकर्ण विष्टले टेरेनन्, रामेश्वर रायले बुझेनन्
जीवनभर स्वस्थ्य रहनका लागि यी ५ उपाय जानीराखौ
स्वस्थ रहनका लागि स्वस्थकर खाना खानु आवश्यक हुन्छ । त्यसैले बालापनदेखि नै राम्रो र स्वस्थकर खाना खाने सल्लाह दिइन्छ । पछिल्लो समय विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोनाभाइरसको संक्रमणका कारण स्वस्थ्यकर खाना खानु कति जरुरी छ भन्ने कुरालाई झनै उजागर भएको छ ।
कोरोना भाइरसको अहिलेसम्म कुनै खोप पत्ता नलागेका कारण शरीरमा रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने र कोरोनासँग लड्नुपर्ने स्वास्थ्य चिकित्सकहरुले सल्लाह दिएका छन् । तर, शरीरिक र मानसिक रुपमा नै स्वस्थ हुन कस्तो खाना खाने त ?
पर्याप्त पानी - पानी शरीरको लागि अत्यावश्यक पदार्थ हो । पानीले शरीरका सम्पूर्ण अंगहरुलाई सफा राख्न (डिटोक्सिफिकेशन) गर्न मद्दत गर्छ । पर्याप्त मात्रामा पानी पिउँदा छालामा चमक बढ्ने, शरीरमा मेटाबोलिज्म तीव्र हुने, शरीरमा शक्ति कायम रहन मद्दत गर्छ । त्यसैले हरेक दिन ३ लिटर पानी पिउन आवश्यक छ ।
रंगीन फलफूल र सागसब्जी - फलफूल र सागसब्जीमा हुने अलग–अलग रङले अलग–अलग पोषक तत्व पाइने कुरा दर्शाउँछ । जुन फलफूलको रङ गाढा हुन्छ त्यसमा एन्टिअक्सिडेन्ट्स र पोषक तत्वको मात्रा पनि बढी हुन्छ । त्यसले हरेक दिन खानामा ३ प्रकारका फलफूल र सागसब्जी सामेल गर्नुपर्छ । यसले तपाईंको शरीरमा लाग्न सक्ने सयौँ रोगहरुबाट बचाउँछ ।
गहुँ, उमारेको गेडागुडी, बियाँ भएको खानेकुरा - खाना बनाउनको लागि जति धेरै मेशिन, ताप र पानीको प्रयोग हुन्छ त्यति नै खानामा भएको पोषक तत्व नष्ट हुन्छ । त्यसैले बजारमा पाइने सबै खानेकुरामा पोषक तत्व नष्ट भइसकेको हुनसक्छ । त्यसैले, स्वस्थ रहनको लागि घरमै भिजाएर उमारेको गेडागुडी, गहुँको परिकार, चोकर, बिज भएको खानेकुरा धेरै खानुपर्छ । किनकी यसमा फाइबरको मात्रा धेरै हुने भएकाले पेटलाई सधैँ स्वस्थ रहन, कोलेस्ट्रोल कम गराउन र शरीरमा अनावश्यक बोसो उत्पादन हुनबाट बचाउँछ ।
व्यायाम - शरीरमा तन्दुरुस्त राख्नको लागि नियमित व्यायामको आवश्यकता पर्छ । जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउने र हरेक दिन शरीरलाई आवश्यक पर्ने कसरत गर्नुपर्छ । दैनिक परिश्रम गर्नुपर्ने कामकाज गर्ने व्यक्तिहरु बाहेक अरुका लागि हरेक दिन ३० देखि ४० मिनेट व्यायामको आवश्यकता पर्छ ।
चिनी कम खाने - चिनीमा मात्रै चिनी बढी हुन्छ भन्ने होइन । जुनसुकै गुलियो पदार्थमा पनि चिनीमो मात्रा हुने गर्छ । जुनसुकै बनाइएको खानामा चिनीको मात्रा अत्यधिक हुन्छ । प्याकिङमा हुने खानेकुराहरु चिनिको मात्रा बढी हुने भएकाले यसको सेवन गर्नु स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन्छ । एजेन्सी
यस्ता छन् अनुहारको छाला चम्किलो बनाउने ३ घरेलु औषधि
तपाइको तौल तपाइको उमेर अनुसार छ त ? कति हुनुपर्छ उमेर अनुसार तौल, हेर्नुहोस्